Usoro mmepụta nke karama iko na-agụnye:
Processing Nhazi ihe ndị dị ụkọ. Gbanyụọ akụrụngwa buru ibu (quartz ájá, ntụ ntụ soda, limestone, feldspar, wdg) iji kpọnwụkwa akụrụngwa mmiri, wee wepụ ihe ndị nwere iron iji hụ na ogo nke iko ahụ.
②kwadebe ihe ndị ị ga-eme.
③ Na-agbaze. A na-eme ka ngwa a na-agba iko ahụ n’ọkụ dị elu (1550 ~ 1600 ogo) n’ime ebe a na-adọba mmiri ma ọ bụ n’ọkụ iji mee ka ọ bụrụ otu, ihe anaghị afụ, na iko mmiri na-emezu ihe a chọrọ.
④ ormlọ nyocha. Tinye iko mmiri ahụ n’ime ebu ahụ iji mee ngwaahịa nke iko achọrọ, dịka efere dị larịị na arịa dị iche iche.
⑤ Na-ahụ maka ahụ ọkụ. Site na annealing, imenyụ na usoro ndị ọzọ, nchekasị, nkewa nkewa ma ọ bụ mkpu mkpu n'ime iko ahụ na - ewepụ ma ọ bụ mepụta ya, a na - agbanwe ọnọdụ nhazi nke iko ahụ.
, Ọdịiche dị n’etiti iko na -eme ka mmiri kpuchie ya
1. useszọ dị iche iche
A na-eji iko tempered n'ọtụtụ ebe na ụlọ, ịchọ mma, ụlọ ọrụ na-emepụta ụgbọ ala (ọnụ ụzọ, windo, mgbidi nke ákwà mgbochi, ihe ịchọ mma n'ime ụlọ, wdg), ụlọ ọrụ na-emepụta ihe eji eme ihe (ihe ndị ọzọ eji achọ ụlọ, wdg), ụlọ ọrụ na-emepụta ihe eji eme ihe n'ụlọ (ihe omume TV, ite ọkụ, ikuku. ntụ oyi, igwe nju oyi na ngwaahịa ndị ọzọ).
A na-ejikarị iko a na-eme ka mmiri dị ọkụ na ụlọ ọrụ dị mkpa (iko iko na-eguzogide okpomọkụ, tebụl iko na-eguzogide okpomọkụ, wdg), na ụlọ ọrụ ahụike (nke a na-ejikarị ọgwụ ampoules na ndị na-eme nchọpụta ahụ).
2. Mmetụta okpomọkụ dị iche iche
Igwe na-eme ka mmiri dị ọkụ bụ ụdị iko nwere nguzogide ujo ọkụ ike (nwere ike iguzogide nkwụsịtụ ngwa ngwa na mgbanwe ọkụ ọkụ ngwa ngwa na obere ọnụọgụ nke ịgbasa ọkụ), ma na-eji nnukwu okpomọkụ (oke ọkụ na-eme ka mmiri dị nro). , ọbụlagodi mgbe ọnọdụ okpomọkụ dị na mberede Ọ nwekwara ike iji ya mee ihe n'echeghị mgbe agbanwere ya.
Mgbanwe nwa oge na iko a na-ekpo ọkụ na ngwa ndakwa nri nwere ike ịkpata mbibi. N'ime usoro ịme iko dị ọkụ, n'ihi "nickel sulfide" dị n'ime ya, iko ahụ ga-agbasawanye na oge na ngbanwe ọkụ, enwere ike mgbawa nke onwe. Enweghị ike iji ya ma ọlị.
3. cruszọ ụzọ dị iche iche esi egwe ihe
Mgbe iko ahụ na-eguzogide okpomoku ga-agbaji, ọ ga-akụri, ọ gaghị agbasasị. Igwe na-egbochi ọkụ enweghị ihe ọ bụla nwere ike igbu onwe ya n'ihi sọlfọ nickel, n'ihi na iko na-eguzogide okpomọkụ na-eji nwayọ nwayọ, enweghị ike maka ikuku n'ime iko ahụ, yabụ agbajikwa agaghị efe efe.
Mgbe iko a na-agbaze agbaji agbaji, ọ ga-agbawa ma fepụ. N’oge a na-efe efe, iko a na-eche ihu na-etolite akwa na ikike ikuku, yabụ mgbe o merụrụ ma ọ bụ gbasaa, a ga-ahapụ ike ya, mepụta iberibe gbasasịa, n’otu oge mgbawa.
Oge nzipu ozi: Apr-29-2020